ကားတစ်စီး Tech မှ Key ကို Concepts
by ဂျယ်ရမီ Laukkonen
ဘလူးတုသ် OEM နှင့် aftermarket ကားတစ်စီးစတီရီယိုနှစ်ဦးစလုံးတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်တဲ့အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပြီး, သူကဖြစ်စေတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ဆဖြစ်စေ Din ခေါင်းကိုယူနစ်ကန့်သတ်ထားပါဘူး။ ဤသည်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို devices များ 30 အထိခြေအကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးအချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်, ဒါကြောင့်သေးငယ်တဲ့, ဖန်တီးစံပြဖြစ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဧရိယာနက်ဝပ် (PAN) ကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ထရပ်ကားအတွင်းပိုင်း။
ဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယိုကကမ်းလှမ်းလုံခြုံမှု, အဆင်ပြေခြင်း, ဖျော်ဖြေရေး features တွေမျှမျှတတကွဲပြားခြားနားကြသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့က built-in ကတော့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်သောဦးခေါင်းယူနစ်ကန့်သတ်ထားမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းယူနစ်ဘလူးတုသ်ရှိသည်ပါဘူးဆိုရင်တောင်သင်ဆဲနိုင်မည်အကြောင်း လက်ျာအတွက် add-on ကိရိယာအစုံနှင့်အတူလက်အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုနဲ့ audio streaming များကဲ့သို့အ features တွေ၏အားသာချက်ယူပါ။
ဘလူးတုသ်ဆယ်လူလာဖုန်းများနှင့်ဦးခေါင်းယူနစ်များကဲ့သို့ထုတ်ကုန်များပြန်ထွက် data တွေကိုဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ဆက်သွယ်ရေး protocol တစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်တချို့ဘလူးတုသ်-enabled devices တွေကိုအခြားသူတွေထက်ပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆက်ကပ်။ မဆိုပေးထား Bluetooth ကိုကားတစ်စီးစတီရီယိုကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဒါကြောင့်တချို့ဦးခေါင်းယူနစ်အခြားသူများထက်သိသိသာသာပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပူဇော်သော profile များကိုမှီခိုဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါတိကျတဲ့ features တွေ။ ဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယိုကကမ်းလှမ်းအသုံးအများဆုံး features တွေ၏အချို့တို့ပါဝင်သည်:
audio streaming ၏
ဝေးလံခေါင်သီ app ကိုထိန်းချုပ်မှု
ဦးခေါင်းယူနစ်နှင့်မဆိုတခြားစက်များအားလုံးစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့အရာအားလုံးတို့အတွက်တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ feature "ဘလူးတုသ် stack" ဟုအဆိုပါတသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို profile များကိုအသုံးပြုခြင်းစေသည်။
ကန့်နေချိန်မှာ ကားမောင်းတဲ့အခါမှာဆယ်လူလာဖုန်းကိုသုံးစွဲဖို့တရားမဝင် အများအပြားတရားစီရင်မှုအတွက်ထိုဥပဒေများကိုအများစုလက်အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ အများအပြားဆယ်လူလာဖုန်းများ speakerphone options များ ပူဇော်. , တစ်ဦးကဘလူးတုသ်ဆဲလ်ဖုန်းနားကြပ်ကိုတိုက်ရိုက်တွဲနိုင်ပါသော်လည်း, တစ်ဦးကဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယိုတစ်ဦးပိုပြီးဘက်ပေါင်းစုံအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
ဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယိုလက်အားအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်လိုအသုံးပွုနိုငျနှစ်ခု profile များကိုရှိပါတယ်:
HFP ပိုမိုနက်ရှိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကမ်းလှမ်းနေချိန်မှာ HSP ပိုပြီးလေ့, aftermarket လက်အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုပစ္စည်းများထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျလကျ-အခမဲ့ပရိုဖိုင်းကိုထောက်ပံ့မယ့် Bluetooth ကိုကားတစ်စီးစတီရီယိုရန်သင့်ဆယ်လူလာဖုန်းကိုတွဲလိုက်တဲ့အခါဖုန်းခေါ်အစပျိုးသောအခါဦးခေါင်းယူနစ်ပုံမှန်အားဖြင့်နိမ့်ပါသို့မဟုတ်အသံအတိုးအကျယ်အသံပိတ်ပါလိမ့်မယ်။ သောစတီရီယိုလည်ပတ်ဖို့ဘီးမှသင်၏လက်၌ဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိခြင်းကနေသင်တို့ကိုကယ်တင်ကတည်းကဘလူးတုသ်ပေါင်းစည်းမှု၏ဤအမျိုးအစားအဆင်ပြေစေရန်နှင့်ပိုမိုဘေးကင်းသိသိသာသာအဆင့်ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
Stored ဆက်သွယ်ရန်ဖို့ Access ကို
တစ်ဦးကဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယိုအရာဝတ္ထုတွန်းအားပေးပရိုဖိုင် (OPP) သို့မဟုတ်ဖုန်းစာအုပ် Access ကိုကိုယ်ရေးဖိုင် (PBAP) ဖြစ်စေထောက်ခံပါတယ်သောအခါ, ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်သိမ်းဆည်းထားမယ့်သောအဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုဝင်ရောက်ဖို့ဦးခေါင်းယူနစ်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ OPP ကဘလူးတုသ်စတီရီယို၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်ရှိရာဦးခေါင်းယူနစ်မှအဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်ပို့ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လက်အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့်ပြုသော်လည်း, သင်သည်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပြီးနောက်အဆက်အသွယ်ပြန်ပို့ပါရန်ရှိသည်။
ဖုန်းစာအုပ် access ကိုပရိုဖိုင်းကိုဦးခေါင်းယူနစ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတစ်ဦးတွဲဆယ်လူလာဖုန်းမှသတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်သွယ်ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအတွက်အနည်းငယ်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သည်။ ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူအဆက်အသွယ်အင်ဖို update လုပ်ဖို့စေသည်ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးတိုးတက်လာသောလက်အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဘလူးတုသ် audio streaming ၏ထောက်ပံ့သောဦးခေါင်းယူနစ်ကိုသင်ကြိုးမဲ့သင့်ကားစတီရီယိုမှသင့်ဖုန်းမှဂီတနှင့်အခြားအသံဖိုင်များကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သငျသညျဂီတ, အသံဖိုင်စာအုပ်များ, သို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းတွင်အခြားအကြောင်းအရာကိုရှိပါကအဆင့်မြင့်အသံဖြန့်ဖြူးပရိုဖိုင် (A2DP) ကိုထောက်ပံ့မယ့် Bluetooth ကိုကားတစ်စီးစတီရီယိုကြောင့်ကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သငျသညျပန်ဒိုရာ, Last.fm နှင့် Spotify နဲ့တူအင်တာနက်ရေဒီယိုကစားရန်နိုင်ပေမည်။ သင်၏ဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယိုအသံ / ဗွီဒီယိုအဝေးထိန်းပရိုဖိုင် (AVRCP) ကိုထောက်ပံ့လျှင်, သင်ပင်ဦးခေါင်းယူနစ်ကနေလွှင့်အသံထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဝေးလံခေါင်သီဘလူးတုသ် App ကိုထိန်းချုပ်ရေး
AVRCP မှတဆင့် streaming မီဒီယာကိုထိန်းချုပ်အပြင်, အခြားဘလူးတုသ် profile များကိုတစ်တွဲဖုန်းပေါ်မှာအမျိုးမျိုးသောအခြားအက်ပ်ကျော်အဝေးထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအမှတ်စဉ်ဆိပ်ကမ်းကိုပရိုဖိုင် (spp) ကိုသုံးပြီးတစ်ဦးကဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယိုအမှန်တကယ်အဝေးမှ A2DP နှင့် AVRCP အဆိုပါမီဒီယာစီးဆင်းမှုကိုခံယူခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်ပြီးနောက်, သင့်ဖုန်းပေါ်မှာပန်ဒိုရာနဲ့တူ app များကိုဖွင့်နိုင်ပါ။
သင့်ကားစတီရီယိုဘလူးတုသ်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမထားလျှင်, သင်ဆဲသောဤတူညီသော features တွေအများအပြား၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတစ်ခုကဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယိုပေးနိုငျသကဲ့သို့ချောမွေ့စွာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ပစ္စည်းများနှင့်အခြားဟာ့ဒ်ဝဲ သငျသညျလကျကို-အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု, audio streaming ၏, နှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူပေးလိမ့်မည်။ အလားအလာကဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယိုအခြားနည်းလမ်း၏အချို့တို့ပါဝင်သည်:
ဘလူးတုသ် audio streaming ၏ပစ္စည်းများ
Code ကို Reader ကိုကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ scan Tool ကို
Cams ဥပဒေရေးရာ Dash နေကြတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့က Trouble အတွက်သင်ဟာ Get နိုင်သလား?
Cams ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိမထိမခိုက် Cam Apps ကပမထိမခိုက်
Manual ဂီယာသည်ဝေးလံသောကား starter
ဘယ်လိုကင်မရာများကိုလုပ်ငန်း Dash သလား?
HD ကိုရေဒီယို: ဘယ်လိုဒါဟာအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်မည်သို့ဒါဟာ Get မှ
Excel ကို Array ပုံသေနည်းတွေနဲ့အကွိမျမြားစှာ Calculator ထဲကသယ်ဆောင်
Windows 10 ကိုအတွက် Wi-Fi ကိုကွန်ယက် Passwords များကို Share လုပ်နည်း
ပြိုင်ပွဲနှင့်ယာဉ်မောင်းဂိမ်းများ Play ဖို့ဘယ်လိုပေါ်တစ်ဦးကလမ်းညွှန်
တစ်ဦး JAVA ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
Homer Simpson ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာဟာဘာလဲ,
FTP ကိုအသုံးပြုခြင်းဖိုင်များထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီနယူး Folders Add
သင့်ရဲ့ Yahoo Mail အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်ရန်ကဘယ်လို
ပုံနှိပ်ပါမြန်နှုန်း - အဘယ်အရာဒါဟာထင်သလောက်နှင့်အဘယ်ကြောင့်
Loop "အတွက်" တစ်ဦးက Bash ရေးပါရန်ကဘယ်လို
Steps Recorder (PSR) ကဘာလဲ?
အဆိုပါထိပ်တန်းဖိုင်မှတ်တမ်းဒေါင်းလုပ်နှင့် File Transfer Add-Ons များ
Forza Horizon သုံးသပ်ချက် (X360)
သင့်ရဲ့ Facebook ကိုဝါသနာရှင်စာမျက်နှာတစ်ခု Pinterest Tab ကိုထည့်သွင်းနည်း
အွန်လိုင်းသင့် 3D & Models ရောင်းချခြင်းတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမဟာဗျူဟာ
တစ်ပိုတိကျမှန်ကန်သောအင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုများအတွက်5စည်းကမ်းများ
သင်က Apple ကို TV ပေါ်မှာ Apps ကပ Install နိုင်သလား?
အခမဲ့ Sony က PSP Downloads ကိုရှာပါရန်နေရာများ၏စာရင်း